Nametraka tsipika mena ho an’ny fahalalahan’ny gazety ao Hong Kong ny fanamelohana ilay mpikatroka mitaky fahaleovantena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2018 5:41 GMT
Klioban'ireo vahiny mpampita vaovao. Sarin'ny governemanta Hong Kong tao amin'ny HKFP.
Ity lahatsoratra ity dia anisan'ny tatitra navoaka teo anelanelan'ny 4-10 Aogositra 2018 tao amin'ny Hong Kong Free Press. Mifototra amin'ny fifanaraham-piarahamiasa ny famoahana indray ny lahatsoratra.
Mampiseho ny faneren'i Beijing an'ireo mpanao gazety Hong Kong, eo an-toerana sy ny iraisam-pirenena mba hanaja ny tsipika mena ara-politikany ny fifamaliana vao haingana teo amin'ny lehiben'ny mpanatanteraka teo aloha sy ny Klioban'ny Vahiny Mpampita vaovao ao an-toerana.
Nanomboka ny zava-nitranga rehefa nanambara tamin'ny 30 Jolay ny Klioban'ny Vahiny Mpampita Vaovao (FCC) fa ny lehiben'ny antoko politika Andy Chan Ho Tin dia hanao lahateny ao amin'ny Klioba amin'ny 14 Aogositra, izay mitondra ny lohateny hoe “Nasionalisma Hong Kong: Tari-dalana Tsy mety Ara-politika ho an'i Hong Kong eo ambany Fitsipika Shinoa “.
Fotoana vitsy taty aoriana, nitsidika ny FCC ny solontenan'ny Iraka manokan'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny ao Shina ao Hong Kong ary nandrisika azy ireo hamerina handinika ny fanapahan-kevitra.
Hong Kong dia fari-pitantanana manokana ao Shina izay manana fahalalahana manokana sy ara-toekarena bebe kokoa noho ny tanibe, toerana iray antsoina hoe “Firenena Iray, Rafitra Roa.” Tato anatin'ny taona vitsy dia nanery an'i Hong Kong handany lalàna vaovao izay hanamafy ny ” Firenena iray “ampahany amin'ny fitsipika i Beijing.
Chan no mpitantana ny Antoko Nasionaly Hong Kong (HKNP), izay manohana ny fahaleovan-tena feno an'i Hong Kong avy amin'i Shina. Tamin'ny volana lasa teo, namoaka fandrisihana ara-pitsarana ho an'ny Sekreteran'ny fiarovana ny sampan-draharahan'ny fisoratana anaran'ny orinasa (fikambanana) ao Hong Kong mba handràra ny HKNP tsy ho antoko politika. Notononiny ny Fizarana faha-8 (1) (a) amin'ny Didy Hitsivolana Manondro ireo Fikambanana ao Hong Kong, dia nilaza ny departemanta fa “ho an'ny tombontsoam-pirenena, ny fiarovam-bahoaka, ny filaminam-bahoaka, ny fiarovana ny fahalalahana sy ny zon'ny hafa” izany.
Raha nanadihady ny hetsika taloha nataon'ny HKNP sy ny lahatenin'i Andy Chan, dia nahita ny manampahefan'ny polisy fa loza mitatao ho an'ny fiarovam-pirenena ny HKNP. Hoy ny fandrisihana hoe:
Ny governemanta HKSAR dia tsy tokony hiandry ny hisian'ny hetsika ara-politika hampiasa herisetra alohan'ny hidirana an-tsehatra … Na dia tsy mbola niezaka haka fahefana aza ny hetsika ara-politika ary tsy antomotra ny loza ateraky ny politikany, tokony handray fepetra fisorohana ny Governemanta HKSAR satria ny hetsika HKNP dia nanomboka nanao dingana mivaingana ampahibemaso mba hametrahana tanjona tsy mifanaraka amin'ny lalàna.
Nanolotra antontan-taratsy pejy 900 ho an'i Chan ny polisy izay misy ny antsipirihany momba azy sy ny asan'ny antokony ary milaza ny tolo-kevitr'izy ireo handràra ny vondrona. Tsy maintsy mamaly ny antontan-taratsy i Chan amin'ny 4 Septambra.
Fanambaràna sakafo arahin-dresadresaka avy amin'i Andy Chan. Klioban'ny Vahiny Mpampita Vaovao ao amin'ny tranonkala Hong Kong.
Ny fitsidihana ny FCC nataon'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny ao Shina dia tsy voatery haneho endrika olana. Zatra mahazo “toro-hevitra ara-politika” avy amin'ireo solontenan'i Beijing ireo fikambanana media any Hong Kong.
Saingy nanomboka nihanitombo ny fifandonana rehefa nirotsaka an-tsehatra ny lehiben'ny mpanatanteraka ao Hong Kong teo aloha, Leung “CY” Chun-ying ary nanome tsiny ny FCC noho ny fihoarana ilay antsoina hoe “tsipika mena” izy:
Mazava tsara sy tsipika mena tanteraka tsy azo ihoarana ny fahaleovantenan'i Hong Kong. Ny fiarovana ny fahaleovantenan'i Hong Kong dia mitovy amin'ny fiarovana ny loton'ny firenena ary fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenen'i Shina sy ny fahafenoana ara-paritra. Nanasa an'i Andy Chan hiresaka momba ny fahaleovantenan'i Hong Kong ny FCC androany, hanasa ny hafa hiresaka momba ny fahaleovantenan'i Taiwan, Xinjiang ary Tibet izy rahampitso. Inona no hiafaran'i Hong Kong?
Ho setrin'ny fanehoan-kevitr'i CY Leung momba ny “tsipika mena”, notsipihan'i Victor Mallett, filoha lefitra voalohany an'ny FCC ny hasin'ny fahalalahana miteny.
Namoaka taratasy misokatra tamin'ny Facebook avy eo i Leung, izay nampitaha ny fampiantranoan'i Andy Chan tamin'ny hetsika heloka bevava sy ny fampihorohoroana izy:
Azo antoka fa hiaro ny fanapaha-kevitrao ihany koa ianao amin'ny filazàna fa ireo izay manohitra ny fahaleovantenan'i Taiwan dia nomena fahafahana mitovy hizara ny fomba fijeriny. Aorian'ity lojika ity, azo antoka fa tsy hanisy tsipika manohitra ny jiolahy sy mpampihorohoro ianao. Araka ny efa nolazaiko,tokony ho tena hiahiahy isika.
Nolazainy ihany koa fa ny FCC dia nandoa “hofan-trano sarintsariny”. Tamin'ny fanehoan-kevitra, nilaza ny mpanjohy azy fa tokony haka ny trano indray ny governemantan'i Hong Kong.
Notsikerain'ny mpikambana ao amin'ny biraon'ny FCC teo aloha, Francis Moriarty ho toy ny loza mitatao avy amin'ny tsy mahafantatra tsara ny fanambaràn'i Leung :
Diso tanteraka momba ny hofan-trano i Leung … Rehefa nandao ny biraon'ny FC aho telo taona lasa izay, nandoa vola manodidina ny $ 550,000 HKD (70.060 dolara Amerikana) isam-bolana izahay ary tompon'andraikitra tanteraka amin'ny fikojakojana ny tranobe manan-tantara.
Chris Yeung Kin-hing, filohan'ny Fikambanan'ny mpanao gazety ao Hong Kong (HKAJ) nahita ny fanehoan-kevitr'i Leung ho “fanerena ara-politika goavana”:
Mitaky amin'ny FCC hanafoana ny lahatenin'i Chan sy tsy hanasa vahiny tahaka izany intsony i Leung, raha tsy izany, tsy havaozina ny fanofàna na halaina mialoha mihitsy aza … Fanerena ara-politika miharihary izany.
Saingy navoakan'ireo fampahalalam-baovao sy mpanao politika maro mpomba an'i Beijing ny fanehoan-kevitr'i CY Leung. Tamin'ny 8 Aogositra, nisy vondrona mpanao hetsi-panoherana 30 nidina an-dalambe ary nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny FCC tao Afovoan-tanàna mitaky ny hanafoanana ny lahatenin'i Andy Chan.
Nilaza i CY Leung mpitarika teo aloha fa tsy mandrahona ny klioban'ny gazety manoloana ny mpanao lahateny mpomba ny fahaleovantena, ao anatin'ny fihetsiketsehana vaovao izy.
Nanohitra ny fanerena ara-politika ny FCC ary mbola hotontosaina amin'ny 14 Aogositra ny lahateny. Na izany aza, nisy fiantraikany tamin'ny sehatra fampahalalam-baovao hafa eo an-toerana ny fanerena ara-politika.
Nilaza ny filohan'ny haino aman-jerim-panjakana Hong Kong, Leung Ka-wing fa tamin'ny fivoriana ara-potoana tamin'ny 9 Aogositra fa tsy tokony hampiasaina hiarovana ny fahaleova-tenan'i Hong Kong ny haino aman-jery ary noraràna ny fandefasana mivantana ny lahatenin'i Andy Chan tao amin'ny FCC. Nanazava ny sendikan'ny mpiasa ao amin'ny RTHK fa fanaon'ny filohan'ny sampana misahana ny ekipan'ny programa samihafa ny fanapahan-kevitra mikasika ny fandefasana mivantana ny hetsika na tsia aorian'ny dinidinika anatiny. Tsy mahazatra ny mahita filoha mandidy fanapahan-kevitra amin'izao fomba izao.
Mihoatra ny antsasaky ny tompon'ny haino aman-jery ao Hong Kong ihany koa no miasa ao amin'ny sampan'ny governemanta notendren'i Beijing, toy ny Kongresim-pirenen'ny Vahoaka. Na dia tsy misy lalàna manohitra ny fampahalalam-baovao amin'ny fampisehoana ireo mpanohitra ara-politika aza ao an-toerana, dia nandefa mari-pamantarana matanjaka ho an'ny tompon'ny haino aman-jery sy ny ekipa fitantanam-baovaon'izy ireo ny raharaha FCC mikasika toerana misy ny “tsipika mena”. Mihoatra noho ny mangidy ny fiantraikany.